Calendar 2014 “Town” Kalenda - Imewe Mmewe
Kalenda Obodo bu ngwongwo eji eme mpempe akwukwo nke nwere akuku nwere ike ijikota ya na kalịnda. Jikọta ulo n’usoro di iche iche ma nwee obi uto ime obodo nke gi. Designskpụrụ dị mma nwere ikike ịgbanwe oghere ma gbanwee obi ndị ọrụ ya. Ha na-enye nkasi obi nke ịhụ, ijide na iji ya. Ejiri ha dị ka ike na-eju anya na ihe ịtụnanya, na-enye ohere sara mbara. Emebere ngwaahịa anyị mbụ site na iji echiche nke Ndụ nwere imebe.
Aha oru ngo : Calendar 2014 “Town”, Aha ndị na-emepụta ya : Katsumi Tamura, Aha onye ahịa : good morning inc..
Kalenda Katsumi Tamura Calendar 2014 “Town”